7 Matipi Ekudzivirira Mapiki muEurope | Chengetedza Chitima
musha > Mazano Ekufamba > 7 Matipi Ekudzivirira Mapiki muEurope
Maguta ekare anodanana, mapindu anoyevedza, nzvimbo dzakanaka, kukwezva mamirioni evashanyi kuEurope mazuva ese. Vafambi vanobva kupasirese pasirese vanoshanyira Europe kuti vaongorore nhoroondo yayo uye runako uye vazviwanire vaunganidzwa nenjere dzakangwara munzvimbo dzinozivikanwa dzeEurope.. Gara wakachengeteka mukati merwendo rwako runoshamisa nekutevera aya matipi ekudzivirira mapiki muEurope.
1. Matipi Ekudzivirira Mapeki: Ziva Nzvimbo Dzine Njodzi
Kuziva kwaunoenda kunotamba chikamu chakakura pakuve neyakanakisa nguva yehupenyu hwako. saka, paunenge uchironga zororo rako muItari kana France, iwe unofanirwa kutsvaga inofanirwa-kuona nzvimbo pamwe nenzvimbo dzine njodzi. Iko hakuna chikonzero chekushushikana, hauzozviwana uri muhondo yezvikwata, asi kwese kwese kwainosvika kune nzvimbo dzinoonekera, uko vashanyi vanofanirwa kutarisisa zvakanyanya kuzvinhu zvavo uye kuchenjerera vanotora.
nyanya, nzvimbo dzaunofanira kungwarira mukati, inzvimbo senge misika yenhata, dzakabatikana nzvimbo dzakakurumbira, uye zvifambiso mavara. Izvo nzvimbo dzose idzi dzinogovana zvakafanana ndedzekuti dzakazara zvikuru, saka iwe uchakatarisa kuEiffel Tower kana kuMilan Cathedral, zvinonhonga zvinogona kurovera mauri nyore, uye mukati memasekondi chikwama chako chaenda. Kuziva zvakakukomberedza uye mapoka acho ari epamusoro matipi ekudzivirira anotora muEurope.
2. Tsvagurudzo Pickpocketing Tricks Uye Scams
Iyo yakanaka mutorwa kana bump-mune hunyengeri ndeye 2 yeakajairika kunhonga chitsotsi muEurope. Seguta rega rega muEurope rine mashiripiti uye nzvimbo dzinoyevedza, zvakafanana nehunhu hwekunhonga mateki. saka, kana uchida kuchengeta zvinhu zvako zvinokosha, tsvagurudza pachine nguva kune zvakajairika pickpocketing scams kwauri kuenda.
Mimwe mienzaniso yekuwedzera kwekubiridzira ndeye muenzi akanaka anokumbira nguva kana nzira. Paunenge uchitarisa mepu yako, kana kutarisa, vanouya padhuze vobata chero chinhu chiri muhomwe dzako kana bhegi. saka, chenjera uye usawire kune imwe yeiyo 12 hukuru hwekufamba hunyengeri munyika.
Brussels KuLondon Nechitima
3. Matipi Ekudzivirira Mapeki: Siya Zvinokosha MuIhotera
Kusiya pasipoti, makadhi echikwereti, uye zvishongo muhotera yakachengeteka ndeimwe yemazano epamusoro ekudzivirira kunhonga muEurope. Sezvambotaurwa pamberi, vanotora vane tarenda rekuziva chaizvo kwekuwana zvinhu zvakakosha pasina vashanyi vasina kumboona. Uyezve, nhasi paunogona kuwana kopi yepasipoti yako muemail kana foni, kana kubhuka online matikiti ekuona nzvimbo, hapana chikonzero chekutakura mari yako yese kana makadhi echikwereti.
saka, usati waenda kuenda kunodzungaira mune imwe ye misika yemhando yepamusoro muEurope, torai imwe chete yemari yacho. Iko hakuna zvakare chikonzero chekutakura ese ako makadhi echikwereti, asi kana ukaomerera, paradzira mari nemakadhi muhomwe dzemukati dzakasiyana kana mabhandi emari.
4. Chengeta Zvakakosha Zvakakosha Muhomwe dzeMukati
Mabhanhire emari pamazuva ezhizha kana muhomwe dzejaketi yemukati inzira yakanaka yekuchengetedza zvinhu zvako zvakakosha. Uku kunyengera kwekufamba kuri nyore kuita kana iwe uchinge wakapfeka matanda, panguva yekudonha kana yechando uye inogona kunge isinganzwisisike kana mamiriro ekunze achidziya uye ane hunyoro.
Unogona kutenga mabhandi emari mune chero chekufambisa kana shopu yekuyeuchidza kumba kana panguva yerwendo, semuenzaniso muzviteshi zvechitima zvepakati kana nhandare. Kubatsira kwekuchengeta zvinhu muhomwe dzemukati kuri pachena, vatanidzi vanogona kurovera mauri, asi haife yakakwanisa kusvika pamusoro pehomwe yako yehomwe. Nenzira iyi, iwe unogona nemufaro kuenderera uchidzungaira-tenderera uye kuongorora mamaki anoshamisa muEurope.
5. Uyai neCross-Body Bhegi, Kwete Bhegi
Pakudzungaira mikoto yeEurope inoyevedza, kana kumira mumutsara weLouvre unofanirwa kuve wakasununguka. Kupfeka shangu dzakagadzikana kwakakosha sekuva nebhegi rakachinjika paunenge uchifamba. A cross-body bag inoreva kufamba kusina kunetseka, sezvo usingade kuramba wakatarisa pabendekete kuti uone kana paine arikurembera mumitsetse yakazara vanhu.
Uyezve, iwe unogona chete kutora bhodhoro remvura kana chikwama kubva muchinjikwa-muviri bhegi. saka, kuunza bhegi-remuviri bhegi rakanakira kudzivirira kunhonga muEurope, pamwe nekuona nzvimbo zviri nyore uye zvakanaka.
6. Matipi Ekudzivirira Mapeki: Pfeka Uye Ita Senge Yemunharaunda
Chimwe chezvinhu chinopa mushanyi kure kune nyanzvi yekunhonga mapeti yakasarudzika fashoni yekushanya: pouches, mutambo kupfeka, uye kuita kunge mushanyi. Machechi, nzvimbo dzekare, uye akawanda ezviratidziro muEurope zvinoyevedza zvekuti vashanyi vanowanzo mira nekungotarisa, kana kutora mazana emifananidzo.
Zano rakanakisa rekudzivirira kunhonga muEurope kusangana pamwe nevanhu vemo. saka, sekutarisa kwaunoita pamberi penzvimbo dzakanakisa dzekushanyira kwaunofamba, tarisa mafambiro enzvimbo netsika.
Lyon kuGeneva Ine Chitima
Zurich kuGeneva Ine Chitima
Paris kuGeneva Ine Chitima
Bern kuGeneva Ine Chitima
7. Matipi Ekudzivirira Mapeki: Iva neInishuwarenzi Yekufamba
Kuwana inishuwarenzi yekufamba rwendo rwacho usati rwakakosha. Nhasi unogona kuva nezvinhu zvako zvinokosha nemikwende inishuwarenzi zvakare, kungoti kana yarasika kana munyaya iyi, chakabiwa. Inishuwarenzi yekufamba inogona kuponesa hupenyu kana chikwama chako nemakadhi zvakabiwa, munyika yevatorwa pasina anouya kuzonunura.
In mhedziso, kufamba inzira yakanaka yekuongorora tsika, nyika uye uwane maonero anoshamisa. Zviitiko zvakawanda zvekufamba zvinoshamisa uye hazviwanzo kuitika kuti vashanyi vanosangana nekutora mari muEurope. zvisinei, nguva dzose zvinonyanya kugadzirirwa uye kutora matanho, sekutevera matipi edu ekuti ungadzivisa sei kutora muhomwe muEurope.
pano pa Chengetedza Chitima, isu tichafara kukubatsira kuronga zororo rakachengeteka uye risingakanganwiki kune chero nzvimbo muEurope nechitima.
Iwe unoda here kupinza yedu blog positi "Matipi Ekudzivirira Pickpocket MuEurope" kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-avoid-pickpockets-europe%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Portugal, Chitima Kufamba Scotland, Chitima Kufamba Switzerland, Chitima Kufamba UK, Famba Europe